I-china pearlescent mica powder mveliso kunye nabathengisi IHuajing
I-Huajing pearlecent mica powder yenziwe ngamakhefu e-mica akhethiweyo ahlukileyo kuleyo ye-fluorophlogopite yesiqhelo. Kungenxa yokuba yimicah entsha yokwenziwa ngokusetyenziswa kweHuajing ifomula eyahlukileyo kunye nezixhobo zokuvelisa.
Umba Ukucaciswa kwangaphakathi umbala ubumhlophe (ilebhu) ubungakanani bamasuntswana D90 (μm) ubungakanani bamasuntswana D50 (μm) ubungakanani bamasuntswana D10 (μm) Isicelo
-15 -15μm mhlophe 98 12 ～ 15 5 ～ 7 2 ～ 4 Uthotho lweSeri
5, 25 5-25μm mhlophe 98 22 ukuya 25 10 ～ 13 5 ～ 7 Uthotho lwesilivere
10 ～ 40 10-40μm mhlophe 98 40 ～ 42 21 24 10 ～ 12 Uthotho lwesilivere Uthotho lwemilingo Uthotho lweChameleon
10 ～ 60 10-60μm mhlophe 98 49 ～ 52 25 ukuya ku-28 12 ～ 14 Uthotho lwesilivere Uthotho lwemilingo Uthotho lweChameleon
20-120 20-120μm mhlophe 98 108 ukuya ku-113 I-58 ukuya kwi-60 25 ～ 27 Uthotho lwesilivere
40 ～ 200 40-200μm mhlophe 98 Ngo-192 ukuya ku-203 107 ～ 110 49 ～ 52 Uthotho lwemilingo Uthotho lweChameleon
60- 300 60-300μm mhlophe 98 290 ukuya kuma-302 160 ～ 165 73 ～ 76 Uthotho lwemilingo Uthotho lweChameleon
38 ~ 43% 10 ~ 14% 9 ~ 12% I-0.16 ~ 0.2% 24 ~ 32% 0.2 ~ 0.3% 0.02 ~ 0.03% I-0.15 ~ 0.3% 7-8
Ukumelana nobushushu umbala Ubunzima bukaMohs umthamo wevolthi Ukuxhathisa komphezulu (Ω) Indawo yokunyibilika amandla okuhlatywa Mhlophe Ukugoba
Inempawu zokuthamba, ukukhanya kunye nokukhanya okuphantsi. Iifers emva koko zihamba kwezi nkqubo zilandelayo zemveliso: ukhetho olukhethekileyo, ukucoca i-cyclic, ukugaya ngononophelo, ukwahlulwa kwelungelo elilodwa lomenzi we-ultrasonic kunye nokomiswa kobushushu obuphantsi .Ezi nkqubo zigubungele ubuchwepheshe obuninzi bokuqhubekeka kwemveliso ye-mica kule minyaka ingama-30 idlulileyo .Ezinye izixhobo zenziwe yiHuajing Ke umgubo wokugqibela we-mica unezibonelelo zobungakanani beesuntswana ezifanayo, isakhiwo se-wafer esifanelekileyo kunye nobukhulu obuphezulu obuphezulu. I-Huajing synthetic mica powder lolona khetho lufanelekileyo kwi-pearl pigment crystal uthotho, uthotho lwemagica kunye ne-chameleon series.
Ukongeza, i-Huajing mica eyenziweyo yenziwe yonke ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi, ubukhulu bayo buqala kwi-10 ukuya kwi-900μm.
Zeziphi iindidi ezintathu eziphambili zePerlescent Pigments?
Imibala yepearlescent yombala, izithambiso ezenziwe ngepearlescent zombala, ibakala lokutya ibala leeperile
Imibala yePearlescent Pigments
Imibala ityebe kakhulu, kubandakanya: i-pearlescent effect pigments, i-crystal pearlescent effect pigments, imibala ye-aluminium yempembelelo yensimbi, ukusebenza kweeparlescent pigments, imibala emininzi yepearlescent pigments, i-pigment pearlescent pigment, ., Isetyenziswa ngokubanzi kwityathanga, iiplastiki, ushicilelo, iglasi kunye neseramikhi.
Ukuze sihlangabezane neemfuno zentengiso, sijolise ekuphuculeni ukwenziwa kwezinto ezintsha zabathengi kuphuhliso olusebenzayo lwepearlescent pigment ukunceda abavelisi bepearlescent pigment basombulule imiceli mngeni emininzi kwizicelo zentengiso. Ezifana: ukunceda ukuphuhlisa amanqanaba ahlukeneyo wombala we-pearlescent effect, ukusombulula ngokugqibeleleyo imeko-bume ejongene nokugqunywa kweemoto kunye neeplastiki zangaphandle; I-pearlescent engenanto yothuli isombulula iingxaki zongcoliseko lothuli kunye nokusasazeka kunye ne-sedimentation ye-pearlescent pigments kwi-inki yokuprinta; I-pigment ye-pearlescent e-anti-yellowing isombulula iingxaki ze-darkroom yellowing kunye ne-sun yellowing kwiiplastiki Indlela ekhethekileyo yonyango ye-pigment ihlangabezana neemfuno zemveliso ephezulu kunye ne-pigment ephezulu kwimveliso yombala weplastiki.
Sisebenzisa ngokupheleleyo ubuchule bethu kwimveliso ye-mica eyenziweyo, siyaqhubeka nokuvula iindawo ezintsha zesicelo sombala. Umzekelo, iimveliso zobushushu obuphezulu zenza ii-pigment zimelane novavanyo lobushushu obuphezulu kwiglasi kunye nokusetyenziswa kweekheram ngelixa kugcinwa ukuzinza kombala.
Isithambiso seeperile yePegles
Ngokukhula okuqhubekayo kweshishini lezithambiso, umphumo kunye noburhabaxa beemveliso eziziswe ngepearlescent pigments ziya zibaluleka ngakumbi. Iimveliso zezithambiso zenziwe ngombala weperlescent okanye ubuthathaka njenge-satin-like luster, okanye ubengezela ngokuqaqamba njengeidayimani. Ukonyusa umtsalane weemveliso, iimveliso zokhathalelo lomntu zaqala ukusebenzisa i-pearlescent pigment ukuphucula ukubonakala kweemveliso okanye ukwenza isiphumo esikhawulezileyo seemveliso.
Iipeyinti zeeperile ezisetyenziselwa ukwenziwa kwezithambiso kufuneka zicocwe kubushushu obuphezulu kwaye yonke imveliso kufuneka ibe ye-aseptic.
Isetyenziselwa ukuvelisa iperlescent yesilivere ekumgangatho ophezulu kunye nomphumo wokuphazamiseka kombala we-pearlescent, ongenakongeza kuphela ukukhanya kunye nokukhanya kwimveliso, kodwa ikwanobuchule bokufaka ukukhanya ukwenza imibala eyahlukileyo yeeperile ngokusebenzisa umgaqo wokuphazamiseka.
Isetyenzisiwe kwimveliso yothotho lwenyambalala, epeyintwe njenge-chameleon, ngeendlela ezahlukeneyo zokujonga, ungalubona utshintsho lwamava kumbala.
Ukutya kwiBanga lePearlescent Pigment
Oko kubizwa ngokuba kukutya okumnandi kuhlala kugcwele umbala kunye nencasa, kwaye amava obutofotofo abonakalayo ahlala ehamba nexesha elihle. Yongeza kwimveliso yakho
I-Pearl isiphumo sombala, ukusuka kwisilivere, igolide kunye nokuphazamiseka, ukuya kwiithoni ezibomvu nezimdaka ukwenza imibala eqaqambileyo kunye nobukhazikhazi obutofotofo, masibe namava okutya okukhanyayo kunye! Hlola umhlaba we-mica yokutya kunye!
Egqithileyo Iinkampani zeMveliso zeMuscovite kwinto yokudlala engenatyhefu kwaye engenancasa -Calcined mica powder-Huajing
I-Mica esekwe kwiPearlescent Pigment
IMicho Pearlescent Imibala